प्रकाशको पहिलो पूण्यतिथिमा बिनाले गरिन् सिर्जनाको अपमान ! - Sabal Post
प्रकाशको पहिलो पूण्यतिथिमा बिनाले गरिन् सिर्जनाको अपमान !
४ मंसिर, काठमाडौं । नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड निवासमा सोमवार छोरा प्रकाश दाहालको प्रथम पुन्य तिथीमा आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रममा बुहारी सिर्जनामाथि अपमानजनक व्यवहार भएको खुलेको छ ।
खानेपानी मन्त्रीसमेत रहेकी प्रचण्डकी बुहारी बिना मगरले सिर्जनालाई अपमान गरेको आरोप लागेको हो । प्रकाशको प्रथम स्मृतिमा प्रकाशन गरिएको स्मृतिग्रन्थमा पनि प्रकाश दाहालकी पत्नी भनेर बिना मगरको मात्र नाम राखिएको छ । संक्षिप्त परिचयमा सिर्जनाका छोरा प्रसिद्धको नाम राखिएको छ । तर पत्नीमा आफ्नो नाम नराखेर अस्तित्व स्वीकार नगरिएको तथा पूण्यतिथिमा अपमानजनक व्यवहार भएको भन्दै सिर्जनाले ‘सम्बन्धित ठाउँमा’ आपत्ति जनाएकी छन् ।
सोमबारको घटनाबारे अनलाइनखबरले सिर्जनासँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उनले आफू अहिले थप केही नबोल्ने बताइन् । उनले छोरा स्वीकार गर्ने तर आफूलाई स्वीकार नगर्ने कुरा सैह्य नहुने भने बताएकी छन् ।
स्मारिकामा आफ्नो नाम प्रकाशकी पत्नीको रुपमा नराखिएकोमा दुःख लागेको बताइन् ।
स्मारिकामा बिना मगरले प्रकाशको बैबाहिक जीवनका सन्दर्भमा सिर्जना र उनीभन्दा पहिलेकी प्रथम पत्नीलाई चोट पर्ने कुराहरु लेखेको भन्दै आलोचना भएको छ । नयाँ बैबाहिक जीवनमा रहेकी प्रकाशकी प्रथम पत्नीले फेसबुकबाटै सांकेतिक रुपमा बिना मगरप्रति कटाक्ष गरेकी छन्
बार्सिलोनाको पोस्टमा ८ मिनेटमा लेभान्टेको तीन गोल